ALEXIS WAYAN, Onye edemede na TELES RELAY
Na United States, ndị NGO na-akatọ mwepụ nke nzuzo nke akpanwa na ogige ...
Ndi otu NGO nke mba America nwere mkpesa na ha kwuputara hysterectomies na ebe eji eji umu aka ndi nwanyi. Surwa ndị a ga-rụrụ na-achọghị ka ha. Ọ bụ…
Algeria: Onye odeakụkọ Khaled Drareni mara mkpọrọ afọ 2!
Onye ọka iwu ya ekwuputalarị akwụkwọ mkpesa maka onye nta akụkọ na Algeria nke ndị Reporters Without Border. Onye nta akụkọ Khaled Drareni na Machị 6, 2020. | RYAD KRAMDI / AFP N’agha kemgbe March 29, ...
United States: Mkparị hysterectomies kọrọ rụrụ na a onwe n'ụlọ mkpọrọ na ...
Ọ bụ ihe dị egwu ma bụrụ nke na-emetụta ọnụọgụ na-enweghịkarị nsogbu. Ndi otu ndi otu ndi NGO gbara ndi gọọmentị US mkpesa ma katọọ Mọnde ọnụ ọgụgụ buru ibu nke hysterectomies emere ụmụ nwanyị si mba ọzọ na-etinye ...
indsay Lohan wetara ụlọ ikpe HarperCollins n'ụlọ ikpe!
Ide akwụkwọ na-ewe oge, mana Lindsay Lohan yiri ka ọ nọ na-egbu oge. Kemgbe afọ 2014, HarperCollins na-eche ihe odide nke ncheta ya, n’efu. N'ihi nke a, ụlọ mbipụta akwụkwọ gbara akwụkwọ mkpesa megide ...
Caitlyn Jenner na-akwa ụta na ọ bụghị ezigbo nne na nna nye ụmụ ya 4!
Tupu ngbanwe okike ya na 2015, Caitlyn Jenner biri ndụ ya na-enweghị ahụ iru ala na njirimara nwoke e kenyere ya n'oge ọmụmụ. “Enweghị m ntụsara ahụ na njirimara m, ọbụlagodi mgbe m dị ezigbo ...
Miley Cyrus nwere ahụmahụ ọjọọ nke mgbasa ozi mgbasa ozi nke ịgba alụkwaghịm ya!
Na ihe omume na-adịbeghị anya nke Podcast nke Joe Rogan, Miley Cyrus lere anya na alụkwaghịm ya na Liam Hemsworth. Na ịnụ ya, ihe agbanweghị n'ụzọ otu mgbasa ozi si kọwaa ya. "Gịnị n'ezie na-eme nzuzu na nke a ...
Prince Andrew: ọ gaghị esonye na ememe nke afọ 100 nke nna ya Philip!
Ezinụlọ eze na-ezube ime ihe niile iji chebe aha ya. Ọ bụ ezie na Prince Andrew ka na-etinye aka na okwu Epstein, a machibidowo ya ọzọ site na mmemme ezinụlọ. Prince Andrew bụ ...
Neymar na-ewe iwe: kpakpando ahụ na-ebo onye ọkpụkpọ OM ebubo ịkpa ókè agbụrụ!
Onye duel a na-atụsi anya ike n'etiti PSG na OM bụ ihe omume dị na Sọnde, Septemba 13, 2020. Onye kpakpando ndị Paris ahụ bụ Neymar nyere iwe megide onye iro ya bụ Alvaro Gonzalez, onye ọ na-ebo ebubo maka ịkpa ókè agbụrụ. Ọ emebeghị ...
Asaa ruo asatọ: akaebe na-agagharị agagharị nke nne onye nwa ya “kpọchiri akpọchi ...
Sọnde Septemba 13, 2020, e sere foto asaa nke asaa nye Chrystelle, nne nke nwa ya nwoke dị afọ asatọ kwenyesiri ike na ọ bụ nwa agbọghọ kpọchiri n'ahụ nwoke. Nke a kpaliri, onye nke a laghachiri na ahụ erughị ala nke nwa ya ...
1 2 3 ... 16 esote